Vinyl zaphansi, Wpc Vinyl zaphansi, SPC zaphansi, PVC zaphansi - Lingdian
Izinkuni Grain zikhiqiza Series
WPC vinyl zaphansi
vinyl flooring, wpc vinyl flooring kanye flooring SPC
Akukhona yini oyifunayo? Kunjani ...
luningi abasebenzi bethu futhi ukuthekelisa isipiliyoni, ukuphathwa eziphambili kusenze ukuhlulwa e umhlobiso umkhakha. Okwamanje ukuthekelisa 95% ukukhiqizwa yethu USA, Canada, i-Ningizimu Melika nase-East Europe nokunye. Inhloso yethu ukuthi unikeze impahla ozinzile futhi eliphezulu kuwe futhi wenze ukuphila kwakho kube ngcono.
Vinyl Floor Chofoza System Series
4.Base ungqimba nge-fiberglass
Nge enkulukazi umkhakha nakho abaqeqeshi egunyaziwe futhi bahloli, abasebenzi bazothola ithuba lokufunda kusukela best ngenkathi ekutholeni amakhono awusizo edingekayo ukuze azizwe ekhululekile kunoma isiphi simo.
SPC IPHANSI 12068
SPC IPHANSI 643-0
SPC IPHANSI 602-10
SPC IPHANSI 232-03
Changzhou Lingdian Izinkuni inkampani yasungulwa ngo 2003. yethu isitshalo ndawo 80,000 square metres. Singabantu ibhizinisi phambili emkhakheni vinyl flooring, wpc vinyl flooring and SPC flooring e China. Ukuze vinyl flooring, umthamo yethu iziqukathi ezingaphezu kuka-150 njalo ngenyanga; Ukuze wpc vinyl flooring. umthamo wethu iziqukathi ezingaphezu kuka-150 njalo ngenyanga; Ukuze flooring SPC, umthamo wethu iziqukathi ezingaphezu kuka-50 nyanga zonke.